Diyaaradda Air Uganda oo duulimaad toos ah ka bilowday magaalada Muqdisho +Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Diyaaradda Air Uganda oo duulimaad toos ah ka bilowday magaalada Muqdisho +Sawirro.
Diyaaradda Air Uganda oo duulimaad toos ah ka bilowday magaalada Muqdisho +Sawirro.
Xaflad lagu daahfuray duulimaad toos ah oo diyaaradda Udanda Airlines ay ka sameyn doonto magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala ayaa saaka lagu qabtay garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde halkaas oo lagu shaaciyay duulimaadka Air Uganda ee Muqdisho to Kampala.
Daah furka waxaa ka qayb galay masuuliyiin dowladda federaalka ka tirsan oo ay ka mid yihiin Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda XFS Cabdulqaadir Axmed Kheyr wasiirka Waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre iyo xubno kale sidoo kale Safiirada beesha Caalamka ee Soomaaliya jooga waxaana halkaaas lagu shaaciyay in Air Uganda ay duulimaad joogto ah ka sameyn doonto Muqdisho iyo Kampala wixii hadda ka bilowda iyadoo duulimaadkii ugu horeeyay saaka bilowday.
horay ayay 2013 kii Uganda Airlines duulimaaadka uga bilawda Muqdisho hase ahaatee waa joogsaday waxyar ka dib maadaama duulimaadyada guud ahaa shirkadaas ay hakad galeen sababo dhaqaale xumo la xiriira.
Previous articleDanjire Abuukar Baale: Waxaan ku bogaadinayaa Golaha Amaanka ee QM diidmada qaraarka tirsigiisu yahay 1267
Next articleWasiirka Arrimaha gudaha” Shirkii aan caawa yeelanay madaxda Ahlu sunna waxaa lagu xaliyay tabashooyinkii Jiray” daawo Vedio ga